Movember Ataon’ireo ‘Mo Bros’ Amin’izao Fotoana Ao India · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Desambra 2014 17:25 GMT
Ram Singh Chauhan avy any Jaipur nomen'ny World Records India sy ny World Amazing Record Ahmedabad voninahitra noho ny Volombavany Lava indrindra mahatratra 17 Feet (5 m eo ho eo). Sary an'i Paavan Solanki. Fizakàmanana Demotix (24/9/2014)
Tapitra ny Movember— hetsika fanao isan-taona ahitàna ny fampaniriana volombava mandritry ny volana Novambra mba hanentanana momba ny olana ara-pahasalaman'ny lehilahy. Mandritra ny volana 11 manaraka, mandra-pahatonga ny amin'ny taona hoavy indray mazava loatra, hahatsiaro ny hamamin'ny Movember ry zareo Indiana. Toa nahasarika manokana tao India tamin'ity taona ity ny volo amin'ny tava. Any India izay ahitàna manerana ny firenena ireo “mo bros”— tsy hoe any amin'ireo tanàn-dehibe ihany, fa koa any amin'ireo tanàna madinika. Hita ihany koa aty anaty media sosialy ireo Indiana lahy manaja ny Movember, izay nahalasa ny fakàna sary ny tena miaraka amin'ny volombava be ho firehana, na tao India na erantany.
Manina ny #moochh rehefa #Movember! Tiako ny zavatra afaka ataony rehefa ampiarahana amin'ny taovolo natao ho an'ny andro iray sy… http://t.co/B0Us2jsMRG
@bunty_walia ary dia fahafinaretana ny nifanena taminao indray. Fahafinaretana nony farany ny afaka nipendipendina niaraka taminao. #MoBros #Movember pic.twitter.com/iS0ejmZENz — devendra pai (@DEVenDrapai) November 23, 2014
@AXNIndia ity ny sary milay tamin'ny sarintena niarahana tamin'ny BFF iray #MovemberWithAXN Fifaninanana nahafinaritra re izany!! #beardedmen #lovemax pic.twitter.com/B8xrwC6gsq
Noho ny antony tsy mazava, ity sary ity dia heverina hampahatsiahy anareo ny mikasika ny homamiadan'ny bongan-dehilahy sy http://t.co/D5NF6SAGnS pic.twitter.com/jT7Na27FXj
Fitambaran'ny teny hoe “mustache” sy “November” ny Movember. Ny “Movember Foundation” no mandrindra ny ezaka ankapobeny hanentanana mikasika ny olana ara-pahasalaman'ny lehilahy — indrindra fa ny homamiadan'ny praostaty. Ireo mpandray anjara amin'ilay hetsika, fantatra amin'ny hoe “mo bros” dia mandrisika ny hafa mba hanao tombana ara-pahasalamana isan-taona, mba hahafantarana ny momba ny tantaran'ny homamiadana mety nisy teo amin'ny fianakaviany (mba ho amin'ny fisorohana), sy handraisana fomba fiaina ara-pahasalamana. Tamin'ny 1 Novambra, nisoratra anarana tao amin'ny Movember.com miaraka amin'ny tarehiny voadio tsara ireo lehilahy ary mamela ny volombavany hitsiry mandritry ny volana mazava loatra.
Mazava loatra fa ny Movember dia tsy fotoana fotsiny ho fanararaotan'ny lehilahy hampideràna ny volombavany; fotoana koa io ahafahany manangona vola hiatrehana ny olana ara-pahasalamana manjo ny lehilahy. Amal Vartak, mponina ao Mumbai, dia nanohana ny Movember, tsy tamin'ny fanaovana fanentanana fotsiny fa koa tamin'ny nahangonany $1,800. Nisy vehivavy sasantsasany, fantatra fotsiny amin'ny hoe “mo sistas,” nandray anjara koa tamin'ny ezaky ny Movember.
@AXNIndia #MovemberWithAXN Ny endriko tamin'ny #Movember ☺️ Dia tena nahita fafiny ianareo ry zalahy ka! pic.twitter.com/E32umkrpe1
Tena toy ny Sangany ao amin'ny Tafika Indiana mihitsy ry @atulkasbekar tamin'ity #movember ity pic.twitter.com/0lllanAZld
Nanomezam-boninahitra ireo zava-bita goavana tamin'ny Movember ny “World Beard and Mustache Championship” – Fiadiana izay ho tompondaka erantany amin'ny be volombava sy ny volombava lava indrindra – any amin'ny faran'ny taona. Marobe ireo olo-malaza no nandray anjara tamin'ity hetsika ity, nahitàna ireo mpilalao sarimihetsika, mpilalao cricket, ary hafa mpanao fanatanjahantena avy amin'ny lafivalon'i India. Shikhar Dhawan sy Ravindra Jadeja samy Indiana mpilalao cricket dia fantatra tamin'ny naha-mpillao bevolombava azy ireo, toy ilay mpilalao sarimihetsika ao amin'ny Bollywood, Ranveer Singh. Na ny Kaomisiona Ambonin'i India any Kanadà aza dia nampiantrano famoriam-bola ho an'ny Movember.
Nalaza be tokoa ny Movember tato anatin'ny taona vitsivitsy izao. Ny fanaovan-tsoa sy ny mahafinaritra, nanova ny endriky ny olana ara-pahasalaman'ny lehilahy, sady ara-bakiteny no sarinteny ihany koa.